Amin`izao mihoatra ny telo tapitrisa ny mponina ka voakasika amin`izay ihany koa ireo kaominina 27 manodidina an`Antananarivo Renivohitra. Ny ben`ny tanàna tokoa no andry iankinan`ny fampandrosoana eo anivon`ny kaominina iray ka antoka mampahomby azy ny fananan`izy ireo traikefa. Araka ny nambaran`Atoa Said Ahmad, tompon’andraikitra eo anivon`ny INDDL (Institut National de la décentralisation et du développement local) dia tsy maintsy manaraka izay fivoarana izay ny kaominina tsirairay avy. Ireo kaominina 27 dia mifandray mivantana amin`ny renivohitra. Izay zavatra miseho amin`ireo kaominina ireo dia tsy afaka misaraka amin` ny CUA ka rariny raha miomana dieny izao, hoy izy. Ilaina ihany koa ny fanomezana fahaiza-manao ho an`ireo ben`ny tanàna sy tompon’andraikitry ny kaominina hahafahana mijery ny filàn`izy ireny tsirairay avy. Marihina fa miankina amin`ny mponina no ahafahana manampy kaominina iray ary tsy mitovy ny filan`ny tsirairay avy, hoy ihany izy. Izany indrindra no nametrahana ny tetikasa GOUGA (Gouvernace Urbaine du Grand Tana) entina hampiofanana ireo ben`ny tanàna sy tompon’andraikitra eo anivon`ny fiadidian`Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Mitentina 5 tapitrisa euros no entina hamatsiana ity tetikasa ity ao anatin`ny efa-taona izay entina hanaganana ny fampandrosoa ifotony.